सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट पेश - Jagaran Post
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट पेश
जागरणपोस्ट १ असार २०७८, मंगलवार २१:०१
सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट प्रस्तुत गर्नु हुँदै कुल विनियोजित मध्ये चालू तर्फ रु. दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगत तर्फ रु. १७ अर्ब ६५करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको जानकारी दिए । यसैगरी, विनियोजन मध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु. एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख,वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ३० करोड विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का लागि रु. ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै, नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनवाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु. छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानवाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब १९करोड ३३लाख, सङ्घीय सरकारवाट समपुरक अनुदानवाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. एक अर्ब २२ करोड ९४लाख, विषेश अनुदानवाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारहरुवाट बजेट प्रणाली मार्फत् परिचालन हुने सहयता रकम रु. दुई करोड ४६ लाख १० हजार समेत कूल स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी गराए ।
यसैगरी, कोरोना महामारीवाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न प्रतिकारात्मक प्रवद्र्धधनात्मक, उपचारात्मक लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टिकृत गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतीको योजनावद्ध विकास माफर्त् सरकारको भूमिका बढाउने,कोरोना भाइरस रोकथामको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, यसको कारणवाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आउन नदिने, कोरोना प्रभावित परिवारलाई राहत, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमवाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत हुने योजना कार्यान्वयनका लागि रु. एक अर्ब ४५करोड दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी सवै भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु. ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु. दुई अर्ब ८३ करोड ५६ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. पाँच अर्ब ८८करोड ५९ लाख,आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि रु. ४२करोड ८५लाख,उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु. दुई अर्ब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि रु. ३० करोड ३३ लाख २३हजार विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताः प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बढाउन उत्कृष्ट पाँच जना कर्मचारी छनोट गरी पुस्कृत गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आगामी साउन १ गतेवाट लागू हुने गरी दार्चुला, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई मासिक रु तीन हजार, अछाम, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक रु.दुई हजार ५०० र कैलाली तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक रु. दुई हजार प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने पनि बजेट वक्तव्यमा छ ।